Ha Guursan Gabar Waxbaratay..Talo Dood Badan Dhalisay | Xaqiiqonews
Ha Guursan Gabar Waxbaratay..Talo Dood Badan Dhalisay
Beryihii u dambeysay waxaa baraha bulshada qabsaday dood ka dhalatay Talo ama waano lagu baahiyey bog facebook carbeed oo ay ku xeranyihiin in ka badan 282 kun oo qof.
Ninka dhalinyarada ee waanada muranka badan dhalisay qoray waxaa lagu magacaabaa Ilyas al khariisi, waxa uuna ku magac dheeryahay shiikh saar.
Shiikh saar oo ka soo jeeda wadanka Marooko, ayaa qoray in ragga guursada dumarka wax bartay, ay halis ugu jiraan “fashil qoys”, guusha waxa ay raacday qofkii helaa naag aan waxba baran-waa sida uu aaminsanyahaye.
Waxa uu intaasi sii raaciyey “ma jeceshahay in aad caruurtaada hooyo fiican u doorto?naag waxbarasho heersare ka gaartay oo banaan u baxeysa ilmahaada hooyo uma noqon karta 99%”.
Qoraalkani muranka badan dhaliyey ayaa intaasi ku daray “hadii aad guursato noocaas, waxa aad ku socotoo qar iska xoornimo, waxa aadna ku qamaareysaa 1%, nasiib wacan ayaan kuu rajeynayaa”.
Sidoo Kale Aqri..Tv-ga Kuuriyada Koonfureed Oo Kulansiyey Hooyo iyo Gabarteeda Dhimatay
Inkastoo ninkani uu asluubeeyey qoraalkiisa lagu tilmaamay “mid gabdhaha u gafaya”, balse dad badan ayaa jawaab ka soo bixiyey “taladadan xasaasiga ah”, gaar ahaan waxa ay ku doodeen in waanadani ay ka hor imaaneysa xaqa ay gabdhuhu u leeyihiin in ay wax bartaan, ayna shaqeystaan.